Usizi kowondliswe indodana (18) 'eyebiwa wumkakhe' - Ilanga News
Home Izindaba Usizi kowondliswe indodana (18) ‘eyebiwa wumkakhe’
Usizi kowondliswe indodana (18) ‘eyebiwa wumkakhe’
Kuthiwa inkosikazi yayingasakwazi ukumtholela abantwana ngenxa yokuvala isibeletho
UGONYULUKA ngamanyala omkakhe owesilisa waseDassenhoek, eThekwini, “omondlise ingane yomfana iminyaka ewu-18”, ezitshela ukuthi ngeyakhe, kanti wayintshontsha ngoba efuna ukukhohlisa yena ukuthi sebenengane. Uthi uthuke woma uMnu Eric Hadebe ngesikhathi esethola ukuthi “indodana” yakhe, uMkhululi Mthimkhulu (osesithombeni), akayizali, umkakhe owashona ngo-2011, engalikhulumile iqiniso uNkk Joyce Hadebe, uMaMkhize, wayintshontsha kowesifazane waseMlazi ayezwana naye.Kuyimanje uthi uyehla uyenyuka, ucela ukufuniswa abazali bangempela bendodana yakhe. Uthi wayeshade noMaMkhize, owayesebenza kwaLizzard, eMngeni, eThekwini. Bahlangana ngo-2002, kwathi besephakathi nothando lwabo ngo-2003, uMaMkhize wambikela ukuthi uzithwele. Ngaleso sikhathi wayeseqalile ukulobola. “Wabeletha” indodana ngoMbasa (April) 2004.
UMnu Hadebe uthi emuva kokuba umkakhe ebelethile, wahamba wayohlala kubo, efika ngokumvakashela. “Kwathi nje esanda kubeletha, ngafonelwa, ngatshelwa ukuthi inkosikazi yami iboshelwe icala lokuntshontsha ingane. Ngathuka ngoma ngoba ngangazi ukuthi ingane ngeyethu, futhi ngangisibona nesisu ezithwele, kodwa sasingahlangani. “Icala laphelela emoyeni ngoba ingane okwakuthiwa uyintshontshile, amaphoyisa kawayitholanga. Bengiyikhulisa ingane, ngiyishisela impepho, ngiyenzela konke ngoba ngazi ukuthi ngeyami. “Ithumba lize labhoboka ngoba seyishonile inkosikazi yami, ngaqala ngezwa izindaba ngabantu ababesondelene nayo, bengitshela ukuthi kunento engabaphethe kahle, bafuna ukuhlambuluka. “Bangitshela ukuthi ingane yomfana engiyikhulisayo akuyona eyami, umkami wayintshontsha kowesifazane waseMlazi ngoba wayengasakwazi ukungitholela abantwana ngoba wayesesivalile isibeletho. “Ziqhubekile lezi zindaba zilokhu zifika, abanye bethi mangiyisukumele le ndaba ngitholele ingane abazali bayo bangempela,” kusho uMnu Hadebe.
Uthi lezi zindaba zigcine seziyihlukumeza nendodana yakhe, njengoba amanye amalungu omndeni wakwaMkhize (koninalume bengane) abeyitshela emehlweni ukuthi kayizalwa khona, mayihambe iyofuna izihlobo zayo. “Sengizame kaningi ukuthola abazali bengane bangempela, sengibuya naseDurban Central, lapho okuthiwa unina wengane walivula khona icala lokuntshontshwa kwayo, kodwa ngifike ngangasizakala. “Amaphoyisa angitshele ukuthi kuzoba nzima ukuthi angisize uma ngingenalo igama lomuntu owavula icala. “Ngihluleke ngisho ngiwatshela ukuthi nginamagama omuntu owayevulelwe icala. “Ngiyacela ukuthi uma kukhona owesifazane eMlazi owantshontshelwa ingane yakhe yomfana ngoMbasa 2004, angithinte ngoba ngiyafisa ukuba ingane ithole isibongo sayo sangempela. “Isize yaphazamiseka ngisho esikoleni ngenxa yale nkinga yokwazi ukuthi kangiyizali, abazali bayo kasibazi,” kusho yena. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Col Nqobile Gwala, uthi bebengenalo ulwazi ngalolu daba. Ucele ukuthunyelelwa imininingwane egcwele ngodaba ukuze bezolulandelela nabaseshi.
Previous articleUSUTHU LUCELE IZIBUSISO ONYAZINI
Next articleBathembisa lukhulu abagadli beChiefs